Kamiaon’ny BNGRC tratra nitondra sokatra : miaramila lietnà iray, polisy iray,…, naiditra am-ponja vonjimaika | NewsMada
Taorian’ny fakana am-bavany nataon’ny fampanoavana, nampidirina vonjimaika am-ponja (MD) any Fianarantsoa, omaly, ny manamboninahitra miaramila lietnà iray,ny polisy iray, ny mpamily sy ny mpanampy azy, nitondra kamiao, tratra nitondra sokatra miisa 19.
Nisy kamiao, an’ny BNGRC, avy nanatitra fanampiana ho an’ny olona tratry ny mosary any atsimon’ny Nosy, nitodi-doha ho aty Antananarivo. Nosakanan’ny polisy mpanara-maso fifamoivoizana teo Ankidona, Fianarantsoa, ilay fiarabe, ary nosavaina ny tao anatiny. Tratra tao ny sokatra miisa 19, karazany roa, sokake (radiata) sy tsakafi. Tsiahivina fa araka ny lalàna 2005-018, sy ny fehezan-dalàna tovana (annexe) amin’ny lalàna iraisam-pirenena Cites, voarara ny fihazana, ny fitazonana, ny fitondrana, ny fivarotana, ny fanondranana, ny biby na ny zavamaniry ahina ho lany tamingana ka ao anatin’izany ny sokatra radiata.
Olona dimy ny tao anatin’ilay kamiao, nahitana miaramila lietnà iray, polisy iray, mpiasan’ny minisiteran’ny Mponina iray, mpamily ny fiara iray ary mpanampy azy.
Fikasana hanao tsindry
Nogiazana ilay kamiao, mitondra takelaka mena, ary niakatra fampanoavana, omaly alakamisy, ny raharaha. Nanapa-kevitra ny fitsarana any Fianarantsoa fa tazonina vonjimaika am-ponja (MD) ireo olona efatra voarohirohy fa nomena alalana hiakatra aty Antananarivo kosa ilay mpiasan’ny minisiteran’ny Mponina satria voalaza fa namoy ny reniny.
Mirotsaka ho mpitory amin’ity raharaha ity ny Fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny harena lovain-jafy (Dredd). Araka ny loharanom-baovao, nisy ny fikasana hanao tsindry tao amin’ny fitsarana, saingy tsy nilefitra ny tao amin’ny fampanoavana. Hikarakara ireo sokatra miisa 19 ny Dredd Fianarantsoa.
Tsy manao kiantranoantrano
Mankasitraka sady matoky ny fahendren’ny fitsarana sy ireo andrimpanjakana misy ireo olona voarohirohy ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto. Hatao atsy ho atsy ny fifanarahana fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny AVG sy ny minisitera MEDD.
Nisaorany koa ny Polisim-pirenena Fianarantsoa, nanao ny asany. Antenainy fa tsy hisy ny fijerena ny maha iray sokajin’asa ary hahay hanome anatra ireo mandika lalàna.
Naneho hevitra ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka taorian’ny nandravan’ny Vondrona polisy manokana “Sakamainty” (Usi) ny fikambanan-jiolahy tany Toamasina farany teo. Nampahatsiahiviny fa tsy misangy na mandefitra, na manao kiantranoantrano, ho an’izay polisy manao ratsy fitondrantena, manao fanamparam-pahefana, tsy manaja ny deontolojia, izy ireo.